UNotoane ufuna balwele isithunzi kowokugcina wamaqoqo
UDAVID Notoane umqeqeshi weqembu lesizwe lebhola lika-Under 23uvuma amaphutha asemuva enze behlulwa iFrance emdlalweni wesibili kaGroup A kuma-Olympics izolo Isithombe: BACKPAGEPIX
South Africa (0) 3
UMQEQESHI weqembu lesizwe lebhola lika-Under 23, uDavid Notoane, ufuna balwele isithunzi sabo uma sebedlala owokugcina wamaqoqo kuma-Olympics aseTokyo, eJapan.
UNotoane ukusho lokhu ngemuva kokuthi iqembu lakhe lidedele amaphuzu agcwele seliwaphethe livumela iFrance ibuye kade ilandela ngemuva emdlalweni wesibili kaGroup A eSaitama Stadium, izolo.
Elakuleli belidinga ukuthi lithole okungenani iphuzu kulo mdlalo ngemuva kokuhlulwa iJapan ngo 1-0 kowokuqala ngesonto eledlule.
Bazodlala neMexico ngoLwesithathu kowokugcina. IJapan iqhwakele kuleli qoqo ngemuva kokwehlula iMexico ngo 2-1 khona izolo. Ukuze elakuleli libe nethuba lokudlulela phambili, lidinga ukunqoba kowokugcina bese lifaka namagoli amaningi. Kuzomele limincele nokuthi iJapan iyehlule iFrance ngalo uLwesithathu
"Asazi ukuthi kuzohamba kanjani emdlalweni wokugcina ngoba bekusemqoka ukuthi sithole noma iphuzu kulo mdlalo weFrance," kusho uNotoane.
"Noma kunjalo sisazongena ngokuzimisela emdlalweni wokugcina sizame ukubuyisa isithunzi sethu. Inhloso bekuwukudlulela emzuliswaneni olandelayo kodwa kubalulekile nokuthi abadlali baveze amakhono abo, nokungabasiza ukuthi bathole amathuba angcono.
"Mhlawumbe ikona okumele sikudlalele kowokugcina, sizame ukuyihlula iMexico sithi noma siphuma kodwa siphume siphethe okuthile."
Iqembu likaNotoane lenzelwe phansi wukuhluleka wukuvala emuva.
U-Andre-Pierre Gignac ushayele iFrance amagoli amathathu, elinye lavalelwa uTeji Savanier. AweNingizimu Afrika ashaywe uKobamelo Kodisang, Evidence Makgopa noTeboho Mokoena.
Iqembu lakuleli lenze izinguquko ezintathu uma uqathanisa nesikwati esidlale kowokuqala. UKatlego Mohamme, Nkosingiphile Ngcobo noKodisang bavale izikhala zikaSibusiso Mabiliso, Goodman Moselle noThendo Mukumela.
Ithuba lokuqala litholwe uLuther Singh ngomzuzu ka-15, i-freekick yakhe yachithwa unozinti weFrance uPaul Bernardoni.
Uphinde wasebenza unozinti weFrance ngomzuzu ka-25, ephuma ngokushesha epalini ukuzovala ibhola likaKodisang, obesejike amadoda amabili ngakwesokunxele.
Unozinti wakuleli uRonwen Williams, ubezipholele ngesiwombe sokuqala, ibhola ebelicishe libe yingozi alivimbile bekuyi-freekick ebiqhamuka kukaputeni uGignac.
UKodisang utholele elakuleli iphenathi ngomzuzu ka-40, ethelwa phansi uLucas Tousart ebhokisini, uSingh walibhangqa nepali ibhola, kwayiwa ekhefini zisabambene ngo 0-0.
Igoli lokuqala liqhamuke ngomzuzu ka-53, uKodisang ulidle ezinyaweni esitobheni seFrance uClement Michelin phakathi ebhokisini, walibeka enethini. Injabulo yezikaNotoane ayiqedanga imizuzu eminingi, iFrance isheshe yalithola elokulunganisa ngomzuzu ka-57.
UKodisang, obeshisa kakhulu kulo mdlalo, uphinde waba umvusi wenyamazane ngomzuzu ka-73, egoba ibhola eliyingozi ngakwesokudla, uMakgopa walithinta kancane kwabhakuza inethi.
Liphinde lahluleka iqembu lakuleli ukuvala emuva, yathola elokulinganisa iFrance uGignac elingqomfela phakathi engamakiwe ngomzuzu ka-78.
UMokoena uyibeke phambili iNingizimu Afrika, edonsa intambo ayizwe ngendaba uBernardoni ngomzuzu ka-82.
Ukuxhamazela emuva kunike uGignac ithuba lokushaya igoli lakhe lesithathu ngomzuzu ka-86, evalela iphenathi ebidalwe uWilliams. IFrance iwantshontshe womathathu amaphuzu ngomzuzu ka-93, uSavanier eshaya umgundatshani emuva kokuzakhela isikhala ebhokisini.
"Bekuwumdlalo onzima kodwa obunohlonze futhi obunyakazisa imizwa. Siwulwele nabo balwa. Sigcine sesihlukaniswe amaphutha. Senze amaningi kunabo emuva. Bashaya amagoli amane thina sashaya amathathu. Ngiyaziqhenya ngendlela abafana abazinikele ngayo nangebhola abalidlalile. Sidlale ibhola eliya phambili. Sidumele ngokuthi sigcine singanqobanga kodwa ibhola linjalo," kusho uNotoane.